समसामयिक Archives - Khula Patra
चन्द्र कार्की, तेह्रथुम । यहाँ जन्मिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीदेखि कृष्णप्रसाद सिटौला, विजय सुब्बा र परशुराम खापुङसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय छन् । तर, यी नेता जिल्लाबाट चुनाव लड्दैनन् । यहाँ ०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट एमालेका भवानीप्रसाद खापुङ दोस्रो पटक ...
भैरहवा । नेपाली कांग्रेसले बुटवलमा दुई दशक अघिदेखि गुमेको आफ्नो साख फर्काएको छ । खेलराज पाण्डेय बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा भारी मतान्तरले विजयी भएसँगै कांग्रेसले लामो समयपछि साख फर्काउन सफल भएकोे हो । निर्वाचन आयोगका अजुसार पाण्डेयले आफ्ना निकटतम प्रतिशस्पर्धी नेकपा एमालेका बाबुराम भट्ट...
काठमाडौं । काँधमा देशको झन्डा ओढेर काठमाडौं महानगरको मेयर बन्‍न चुनावी मैदानमा होमिएका ३१ वर्षीय युवा बालेन शाह यतिखेर विजयोन्मुख छन्। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म करिब ८४ हजार मतगणना हुँदा उनको मत संख्या ३१ हजार पुगिसकेको छ। गणना काठमाडौंको ‘कोर एरिया’भित्र प्रवेश गर्दा पनि उनको मतान्तर घटेको छैन...
रुकुम पश्चिम । कक्षा ४ पढ्दा साथीको झोला छोइएपछि पुष्प बादीले दुई व्यक्तिबाट कुटाइ खाए । एउटा झोलावाला साथी र अर्को शिक्षक । झोलाभित्रको रोटी छोइएको निहुँमा साथीले कुटिन् भने पढाउने शिक्षकबाट पनि उल्टै पुष्पले कुटाइ खाए । आफूलाई कुटेको खबर लिएर शिक्षकहाँ पुग्दा उल्टै रोटी किन छोइदिएको भन्दै शिक्...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरूको वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले खाता खोलेको छ। महानगरको ३० नम्बर वडामा कांग्रेसका दलबहादुर कार्की विजयी भएका हुन्। वडामा वडाध्यक्षसहित कांग्रेसको पुरै प्यानल विजयी भएको छ। यो कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको वडा हो । कांग्रेसका कार्कीले...
काठमाडौं । ११ स्थानीय तह रहेको काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको अग्रता रहेको छ। काठमाडौंका ११ पालिकामध्ये ८ नगरपालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएकोमा नेपाली कांग्रेस पाँच नगरपालिकामा विजयी भएको छ। १० नगरपालिका र १ महानगरपालिका भएको काठमाडौंमा हालसम्म नेकपा एमलेले २ र राप्रपाले १ नगरपालिकामा जित हात ...
काठमाडौं । ओखलढुंगाको रुम्दाली परिवार स्थानीय तहको निर्वाचन छाएको छ। ओखलढुंगादेखि धनकुटासम्म जित निकालेपछि रुम्दाली परिवारको चर्चा बढेको हो। एकै परिवारका चार दाजुभाई यसपटक उम्मेदवार बनेका थिए। जसमध्ये तीन जना निर्वाचित हुँदा एक जना पराजित भएका छन्। रुम्दाली परिवारका जेठा दाइ राजकुमार वडाध...
मौन अवधिका सुरक्षा चुनौती: पैसा बाँड्नेदेखि रक्सी खुवाएर भोट तान्ने खेलसम्म
काठमाडौं । दुई दिनपछि हुने निर्वाचनका लागि मंगलबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधि मतदातालाई आफ्नो धारणा बनाउनका लागि छुट्याइएको समय हो। मतदान सुरु हुनु ४८ घण्टा पहिलेबाट मतदातालाई कसैले पनि प्रभावमा नपारुन् भनेर यस्तो अवधि निर्धारण गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्माले बताए। ...
मौन अवधिमा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइदैन ?
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार राति १२ बजेपछि मौन अवधि लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य चुन्न मतदान सुरु हुनु ४८ घण्टाअघिदेखि मौन अवधि तोकेको हो । मतदान नसकिएसम्म मौन अवधि कायम रहनेछ । निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ, निष्...
यस्तो छ तथ्यांकमा स्थानीय निर्वाचन
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मौन अवधि शुरु भएसँगै प्रचारप्रसार रोकिएको छ भने अब मतदान गर्न मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनाव नहुँदै विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। जसमा ६ वटा वडाध्यक्ष र ३५ जना स्वतन्त्र सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भए...
गरिवका सारथी र समाजसेवाका पर्याय लालकृष्णः जनप्रतिनिधिका रुपमा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने सुरमा
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमै औंलामा गन्न सकिने समाजसेवीमा पर्छन्, लालकृष्ण चौहान । उनलाई अहिले नेपाली कांग्रेसले सिरिजंघा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी बनाएको छ । सिरिजंघा यस्तो पालिका हो, जो ताप्लेजुङमा मात्रै होइन, देशभरकै पालिकामध्ये विकास र शुशासनमा उदाहरणीय बनेको छ । पहिलो ५ वर्ष जसको नेतृत्व गर...
मेरिङ्देनको समृद्धिका लागि डम्बरको नेतृत्व
ताप्लेजुङ । सिंगो मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । गाउँ, नगर र समुदायको विकासका लागि दीर्घकालिन र परिपक्व योजनासहित प्रस्तुत भएका छन् । तिनैमध्येक एक हुन्, डम्बर(युकहाङ्विर)हाङ्गाम । ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँ...
काठमाडौं । संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सोमबार ७५३ वटै पालिकामा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उत्साहजनक रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । मंगलबार बिहान निर्वाचन आय...
तेह्रथुमका कुन पालिकामा कति जनाले गराए उम्मेदवारी दर्ता ?
तेह्रथुम । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि तेह्रथुममा ५ सय ८३ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोग जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तेह्रथुमले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पालिका अध्यक्ष र प्रमुखमा ३० जना, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा २० जनाले मनोनयन गरेको हुन । वडा अध्यक्षमा १ सय २५ जनाले मनो...
तेह्रथुमका सबै स्थानीय तहमा एमालेले टुंग्यायो उम्मेदवार
तेह्रथुम । नेकपा एमाले तेह्रथुमले सबै स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु टुंगो लगाएको छ । म्याङलुङ नगरपालिकाको मेयरमा संजय तुम्बाहाम्फे र उपमेयरमा जमुना सुवेदी, लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयरमा गणेश लिम्बू सेने र उपमेयरमा छविमाया तिम्सिनालाई उम्मेदवार बनाएको नेकपा एमाले तेह्रथुमका अध्यक्ष तेजमान कन्दङवाल...
मधेस प्रदेशका मन्त्रीसहित दुई जना सांसदले मेयर उठ्न दिए राजीनामा
जनकपुर । मेयरमा चुनाव लड्न मन्त्रीसहित मधेस प्रदेशका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिएका छन्। सरकारका कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री प्रमोद यादव र शेख अबुल कलाम आजादले राजीनामा बुझाइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। दुबै जनाले आजै प्रदेशसभामा राजीनामा दिएको प्रदेशसभाका निम...
एमालेको घोषणापत्र : प्राविधिक विद्यालय खोल्नेदेखि विदेश जानेलाई तालिम दिनेसम्म [पूर्णपाठ]
काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।शुक्रबार च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहका बीच एमालेले ६ बुँदे संकल्पसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिनुको कारण, सर्वोच्चको आदेश र...
जसपाको चुनावी घोषणापत्र : शुद्ध पानीदेखि नगर रेलसम्म (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा विभिन्न क्षेत्रका लागि पार्टीको योजना सार्वजनिक गरिएको छ। ‘पालिकास्तरका विद्यालय तथा आधारभूत सेवा कार्यालयहरुलाई सडकसँग जोडिने छ। सबै पालिकाहरुमा एक बसपार्क बनाइने छ। महानगरहरमा नगर रेल सेव...
राप्रपाको चुनावी प्रतिबद्धता : कक्षा १२ सम्म निःशुल्क, सुत्केरीलाई तीन हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता [पूर्णपाठ]
काठमाडौं । राप्रपाले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बुधबार आयोजित ‘स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक’ कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्रमा कक्ष...
युवा रिझाउन ओलीका पुरानै आश्वासन
ललितपुर । ललितपुरको गोदावरीमा नेकपा (एमाले)ले बुधबार ‘युवासँग म’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमको मुख्य अतिथि तथा आकर्षण थिए पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष अध्यक्ष केपी ओली। कार्यक्रममा ओलीले तीन घण्टाभन्दा बढी समय बिताए। अन्य कार्यक्रममा झैं उनले लामो बोले...
गठबन्धनमा उपमहानगरकाे भागबन्डा पनि मिल्यो, कहाँ कुन दलले केमा उम्मेदवारी दिने ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका नेतृत्व कुन दलले लिने भन्ने विषय टुंगो लगाएको छ। आज (बुधबार) ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरको भागबन्डा टुंगिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस सल्लाहकार गाेविन्द परियारले जानकारी दिए। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उ...
पोखराबाट गठबन्धनको शक्ति परीक्षण, माधवको राजनीतिक परीक्षा
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार निकै उत्साहित देखिन्थे। बिहान गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बालुवाटार बैठकमा सहभागी भएर दिउँसो पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडाको पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकै गम्भीर र लचक ...
जन्मोत्सवमा नेविसंघप्रति कांग्रेस नेताको गुनासै-गुनासा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले मंगलबार ५३औँ जन्मजयन्ती मनायो। जन्मोत्सवको अवसर पारेर उसले कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ‘आगामी निर्वाचनमा नेविसंघको भूमिका विषयक विचार गोष्ठी’ आयोजना गरेको थियो। नेविसंघको जन्मोत्सवमा शुभकामना दिन प्रधानमन्त्रीसमेत ...
सत्ता गठबन्धनको बैठक सकारात्मक, मंगलबार पुनः बस्ने
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । महानगर उपमहानगर भागबन्डामा मिलाउन बसेको गठबन्धनको आजको दोश्रो वैठकमा सकरात्मक छलफल भएतापनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । बैठक सकारात्मक भएको जिकिर गरेपनि कुनै ठोस सहमति भने नभएको नेताहरुले बताएका छन् । आफूहरू सहमतिको नजिक पुगे पनि निष्क...
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा किन गएनन् गठबन्धन बैठकमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत सत्ता गठबन्धन दलसँग चुनावी तालमेलको प्रयास थालेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । चैत्र दोस्रो साता बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो– ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा ...
स्थानीय तहले हुदैन भनेपछि केन्द्रबाट गठबन्धन लाद्न मिल्दैन : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले देशभरिका नेता कार्यकर्ताले चुनावमा तालमेल गर्नुहुदैन भन्ने मत राखेको बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलबीच चुनावी तालमेलका लागि सीट बाँडफाँडको तयारी भइरहेका बेला महामन्त्री थापाले पछिल्लो साता ५० भन्दा बढी जिल्लाका नेता कार्यकर्तासँग कुर...
भरतपुरमा कांग्रेसका ५० कार्यकर्ताले राजीनामा दिए, स्वतन्त्र अभियानको घोषणा
चितवन । पालिका चुनावमा चितवन भरतपुरको मेयरमा माओवादी केन्द्रलाई पार्टीले सघाउन लागेको चर्चाबीच कांग्रेसका ५० जना कार्यकर्ताले पार्टीबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। भरतपुर महानगर–१७ का उनीहरूले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन्। पार्टीभित्र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हाबी भएकाले छाड्न बाध्य भएको...
कांग्रेसको अनुशासन कारवाहीमा परेका जोशीले गरे एमालेसँग गठबन्धन
काठमाडौं । कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी समुहले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा एमालेसँग साझा उम्मेद्वार बनाउने सहमती भएको छ। जोशीमाथि अघिल्लो निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको भन्दै कांग्रेसले अनुशासनको कारवाही गरेको थियो । जोशी निवास दमौलीमा शनिबार भएकोको छलफलबाट चुनावी तालमेल गर्न...
गठबन्धनलाई उम्मेदवार टुंगो लगाउनै सकस
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयनको मिति नजिकिँदै गर्दा कर्णालीमा दलहरू तयारी जुटेका छन्। सत्ता साझेदार दल संयुक्त गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) स्थानीयस्तरबाटै उम्मेदवार टुङ्गो लगाउँदैछ। नेपाली कांगे्...
काठमाडौं । अपाङ्गता भएकै कारण लुम्बिनीकी सुनिता यादव यसअघि भएका निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट बञ्चित भइन्। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० लक्ष्मीपुरकी यादवको खुट्टाले काम नगर्ने भएका कारण वैशाखीको सहारामा मतदानस्थलमा पुग्न सकस थियो। मतदानस्थलसम्म आवात जावतका लागि सवारी साधनको व्यवस्थासमेत नभएपछि...
काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वीरगन्ज महानगरपालिकासहित पर्साका सबै स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्ने भएका छन्। केन्द्रले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि अगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र जसपाले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा...
विराटनगर महानगरको मेयरमा कांग्रेसबाट यी हुन् मेयर/उपमेयरका दाबेदार
मोरङ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस महानगर समितिले प्रमुखमा ७ र उपप्रमुखमा ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। विराटनगरको प्रमुखका लागि केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, डा. डिला संग्रौला, वर्तमान नगर प्रमुख भीम पराजुली, कांग्रेस मोरङका जिल्ला उपाध्यक्ष नागेश कोइर...
भरतपुरमा माओवादी केन्द्रसँगै मित्रवत् प्रतिष्पर्धा गराैँ : महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर कांग्रेसले नछाड्ने गरी तेस्रो विकल्पमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शनिबार सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्दै महामन्त्री शर्माले भरतपुरमा नयाँ र तेस्रो वि...
गठबन्धन दलबीचमै पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ : कांग्रेस प्रवक्ता महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कुनै स्थानीय तहमा गठबन्धन दलबीच पनि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बताएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज (शनिबार) पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले कुनै स्थानीय तहमा गठबन्धनका एक भन्दा बढी दललाई आफूले जित्छु भन्ने लागेमा मैत्रीप...
काठमाडौंको मेयरका लागि एमालेले सिफारिस गर्‍यो ५ नाम, को-को परे ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। एमाले काठमाडौं महानगर कमिटीले मेयरसहित उपमेयरका उम्मेदवारका लागि नाम सिफारिस हो। एमाले नेता कृष्ण राईका अनुसार मेयरका लागि पूर्वमेयर केशव स्थापित, हालका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसमेत सिफारिसमा ...
प्रधानमन्त्री देउवा र विप्लवबीच भेटवार्ता, के-के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को टोलीले भेटवार्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनबारे...
पोखरा महानगर : मेयर बन्न मन्त्रीदेखि व्यापारीसम्म दौडमा, कसको कस्तो अवस्था ?
कास्की । पोखरा महानगरको मेयर टिकट पाउन प्रदेश मन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्म दौडधुपमा छन्। पार्टीका स्थानीय कमिटीदेखि शीर्ष नेतासम्म उनीहरूले लबिङ बढाइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बिन्दुकुमार थापा मेयरको टिकट माग्न प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई द...
काठमाडौं। गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमध्ये बेरुजु फर्छ्‍यौट मापनको वर्गीकरणमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको कूल बेरुजुमध्ये ८९.३५ प्रतिशत फर्छ्‍यौट गराई बेरुजु फर्छ्‍यौट प्रगतिमा नेपाल प्रहरी सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री बाल...
२८ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकियो, सिडिओलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २८ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सकिएको छ । आयोगले अहिलेसम्म २८ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने ४५ लाख २२ हजार मतपत्र छपाइ कार्य भइसकेको जानकारी दिएको हो । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म २८ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने ४५ लाख २२ हजार मतपत्र छपाइ कार्य भइसकेक...
सत्ता गठबन्धन : बागमतीका सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने सहमति
हेटौंडा । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि बागमती प्रदेशमा ५ दलीय चुनावी गठबन्धन दल सहमति नजिक पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको गठबन्धनको बैठकमा चलेको छलफलमा बागमती प्रदेशका १ सय १९ पालिका र एक हजार एक सय २१ वडामा नै आ...
माओवादीले दाबी गरेको भरतपुरको मेयरमा कांग्रेसबाट २५ जना आकांक्षी [नामसहित]
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाट २५ जना आकाक्षी देखिएका छन् । कांग्रेसको भरतपुर महानगर समितिले हिजोदेखि प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेकोमा २५ जनाले मेयरमा र २४ जनाले उपमेयरमा दाबी गरेका हुन् । यसरी मेयर दाब...
यी हुन् कांग्रेसबाट काठमाडौंको मेयरका आकांक्षी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसमितिले काठमाडौं महानगरको मेयरका लागि पार्टीबाट आकांक्षीहरूको नाम सिफारिसमा ढिलाइ गरेको छ। सत्तागठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि कुन महानगर कसले लिने भन्ने नै यकिन नभएकोले महानगर कार्यसमितिबाट आकांक्षीका नाम सिफा...
राप्रपाले खटायो केन्द्रीय प्रतिनिधि, आजबाट घरदैलो
काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ भने आजदेखि घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। केन्द्रीय प्रतिन...
यी हुन् इटहरी एमालेले सिफारिस गरेका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार
सुनसरी । नेकपा एमालेले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरमा हालका नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीसहित ६ जना मेयरका आकांक्षीलाई सिफारिस गरेको छ । आइतबार नेकपा एमाले सुनसरीको इटहरी उप-महानगर कमिटीले उम्मेद्वारी दाबी गर्न आकांक्षीलाई बोलाएको बैठकमा चौधरी अनुपस्थित रहे पनि छनोट कमिटिले उनीसहित थप ५ जना आकांक्षील...
नेकपा एसको एक हजार १११ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा एक हजार १११ सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्रीय कमिटी, तीनवटै केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्...
चुनावी तालमेलको सहमति जुटाउने समय थप्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा तालमेलबारे निर्णय गरेर पठाउने म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले कुन पालिका कसले लिने भनेर सहमति गरेर रिपोर्ट पठाउने म्याद थप्ने र आएका रिपोर्टअनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ...
राजनीतिक दललाई आयोगको ६० बुँदे निर्देशन (निर्देशनसहित)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई ६० बुँदे निर्देशन दिएको छ । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित आयोगले दलहरूसँग मंगलबार गरेको छलफलका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता माग्दै ६० बुँदे निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनलाई, स्वच्छ, स्वतन्...
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्- ‘मिडियाले चुनावमा सही जनमत प्रकट हुने वातावरण बनाउनुपर्छ’
दाङ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले आसन्न स्थानीय निर्वाचनवाट सही जनमत प्रकट हुने वातावरण बनाउन पत्रकारिता क्षेत्रले भूमिका खेल्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचनको समयमा सन्तुलित सामग्री पस्केर पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह पनि गरे । नेपाल ...
स्थानीय चुनावकालागि एक करोड ९४ लाख मतपत्र छापिँदै
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको काम सुरु भएको छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छाप्ने काम थालेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कुल एक करोड ९४ लाख थान मतपत्र छापिनेछन् । २३ लहर समूहका ७७ ...
पहिलो प्रयासमै शाखा अधिकृतमा नाम निकालेकी २३ वर्षीय पुष्पा
काठमाडौं । बुबा स्थायी शिक्षक। दिदी, भिनाजु र फुपू सरकारी जागिरे। जीवन सुरक्षित बनाउन सरकारी जागिर नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने गुल्मीको एक परिवारमा जन्मिएकी थिइन् पुष्पा ज्ञवाली। पाँच दिदीबहिनीमध्ये चौथो सन्तान पुष्पा सानैदेखि लोक सेवाको चर्चा सुन्दै हुर्किइन्। परिवारको यही प्रोत्साहनका कारण २...
कांग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिमा आरजु राणादेखि गुरुराज घिमिरेसम्म, को-को परे ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र तयारी समितिलाई पूर्णता दिएको छ। महामन्त्री गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिले सोमबार पूर्णता पाएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र तयारी समिति २७ सदस्यीय बनाएका छन्। समितिमा कांग्रेस नेता, राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरुलाई समेटिएको छ। फागुन ३ गते ...
तीन दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका हुन्। उनलाई कार्यबहाक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सभामुख अग्‍नीप्रसाद सापकोटासहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीह...
भरतपुरको मेयर नपाए एक्लै निर्वाचनमा जाने चितवन कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पद नछाड्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय कमलनगरमा आइतबार बसेको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुख पदमा नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवार रहनेगरी मात्र गठबन्धनका दलहरुबीच चुनावी...
काठमाडौं । विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षले जिल्ला र उच्च अदालतबाट अनलाइन तारेख लिन पाउने भएका छन्। विशेष अदालतको पूर्ण बैठकबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग (अनलाइन)बाट तारिख लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ पारित भएपछि उक्त व्यवस्था लागू हुने भएको हो। अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ अधिकारीका अन...
कांग्रेसले विदेश गएका नेपालीलाई भोट हाल्‍न बोलाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमा आएर वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्‍न आह्वान गर्ने भएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन प्रचार-प्रसार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नेपाली जनतालाई मतदानको बेलामा स्वदेशम...
रामचन्द्र पौडेल सक्रियताका तीन अर्थ
तीर्थराज बस्नेत, नेपालसमयबाट साभार । काठमाडौं । मंसिर २५ गते बिहान आफ्नै निवास बोहोराटारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन प्रक्रियाबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए। आफू नेतृत्वकै गुटका प्रकाशमान सिंह र डा. शेखर कोइरालाबीच सहमति जुट्न नसक्दा आफू सभापतिको साझा उम्मे...
कांग्रेसले तोक्यो उम्मेदवार छान्ने समय तालिका, वैशाख १ सम्म केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति’ ले उम्मेदवार टुंग्याउने समय तालिका निर्धारण गरेको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले वडादेखि उपमहानगरपालिकासम्मका उम्मेदवार टुंग्याउने समय निर्धारण गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले समिति...
निर्वाचन आयोगले तोक्यो स्थानीय तहका उम्मेदवारको योग्यता
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न आज स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ। निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाच...
कांग्रेसको चुनाव परिचालन समितिमा ५५ जना मनोनित, को–को परे ? (सुचीसहित)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति विस्तार गरेको छ । कांग्रेसको मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको थियो । खड्काको नेतृत्वमा रहेको समितिमा ५५ जनालाई मनोनयन गरेको हो । जसमा उपसभापति धनर...
कांग्रेसको चुनावी कमान्डर बनेँ पूर्णबहादुर खड्का, प्रचारप्रसार समितिमा महत
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आशन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। गएको शुक्रबारदेखि पार्टी मुख्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकले आज उक्त निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले प्रकाशशरण महतको...
आकांक्षी धेरै भएपछि देउवाले बनाउन सकेनन् संसदीय समिति
काठमाडाै‌ं । शुक्रबारदेखि सुरु भएर मंगलबार सकिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले चुनावमा टिकट वितरण गर्न संसदीय समिति बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बैठकको निर्णय सार्वजनिक हुँदासम्म कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउन सकेन। कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार समितिमा पदाधिकारीबाहेक ११ जना थपे...
कांग्रेसले देशव्यापी गठबन्धन नगर्ने, तर अवस्था हेरेर तालमेल गर्न सक्ने [यस्ता छन् आठ निर्णयहरु]
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आसन्न निर्वाचनमा देशव्यापी गठबन्धन गर्ने प्रस्तावबाट पछि हटेका छन् । देउवाले बैठकमा बोल्नेक्रममा अन्यदलसँग गठबन्धन नगरे एक्लै चुनाव जित्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै जित्नका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर...
इटहरीमा घरभित्रै बम पड्कियाे, घटनास्थलमा हिमाल सुरक्षा परिषद्काे पर्चा भेटियाे
इटहरी । सुनसरीको इटहरीमा बम बिस्फोट भएको छ। सोमबार राति करिब १० बजे इटहरी उपमहानगरपालिका–२ नवजागृती टोलको एक घरमा बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटमा परि दुई जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरुमा नवजागृति टोलमा बस्दै आएका २२ वर्षीय रविन थापा र लमजुङका २३ वर्षीय शेरजंग गुरुङ रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी ...
विवेकशील साझामा भाँडभैलो : रवीन्द्र मिश्रलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। ​ त्यसका लागि आज बिहान बसेको असन्तुष्ट समूहको बैठकले अध्यक्ष मिश्रलाई स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ। असन्तुष्ट समुहको नेतृत्व गरिरहेका संगठन विभाग प्रमुख नि...
कांग्रेसले चुनावी तालमेलबारे भोलिकाे बैठकमा निर्णय गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भोलि (मंगलबार) निर्णय गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको तेस्रो दिनको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले चुनावी गठबन्धनबारे मंगलबार बैठक बस...
कांग्रेसले प्रचण्ड र माधवलाई बोक्नुहुँदैन : नेता घिमिरे
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने बताएका छन् । उनले अहिलेको जस्तो मौका इतिहासमै बिरलैमात्रै आउने बताएका छन् । नेता घिमिरेले जनतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको हिसावले कांग्रेसले यसपटक तीन वटै तहका चुनावमा एक्लै लड्नुपर्ने बताएका छन् । ‘कांग...
स्थानीय चुनाव : १ करोड ७७ लाख मतदाता, १० हजार ७५६ मतदान स्थल
काठमाडाै‌ं । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले अन्तिम मतदाता नामावली टुंगो लगाएको हो । आयोगका अनुसार ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष मतदाता छन् भने ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना महिला मतदाता...
आयोगले निर्वाचन अधिकृत, तेह्रथुममा को-को खटिए ?
तेह्रथुम । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । आज अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न लागेको आयोगले निर्वाचन अधिकृत पनि तोकेको हो । आयोगले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पारेको छ । तेह्रथुमका ६ वटै पालिकामा...